Sida loo sameeyo Mojito: maaddooyinka, karinta iyo waxyaabo kale oo badan! | Ragga Stylish
Mojito waa mid ka mid ah is biirsadayda ugu caansan adduunka, haddii uusan ahayn kuwa ugu badan. Mid ka mid ah sirta guusheeda ayaa ah inay aad u sahlan tahay in la diyaariyo. Maaddooyinka iyo maacuunta aad u baahan tahay ayaa badanaa laga helaa guryaha badankood. Nidaamka laftiisuna waa mid fudud oo waxaad ku dambaynaysaa inaad si buuxda u tababbarto wax yar oo tababar ah.
Laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah inay tahay is biirsaday gebi ahaanba macaan. Mojito wuxuu ku habboon yahay kulamada saaxiibbada, xafladaha iyo guud ahaan wakhti kasta oo aan dooneyno inaan ku raaxeysano waqtigeenna firaaqada ah ee shirkadda cabitaan fiican.
Astaamaheeda cusboonaysiinta ayaa ka dhigaya xulafo weyn bilaha kulul. Waxay sidoo kale u taagan tahay dheefaha dheefshiidka iyo kicinta. Soo ogow waxyaabaha ay tahay inaad ka hesho mojito Cuba iyo talaabooyinka ay tahay inaad raacdo si aad si fiican ugu diyaariso. Sidoo kale qoraallo iyo tabaha qaarkood oo kaa caawin doona inaad kaamil ahaato oo aad siiso taabashadaada shakhsi ahaaneed. Wax, kan ugu dambeeya, ee in muddo ka dib ku xirnaa dhammaan isku-darka, iyo tani maahan mid ka reeban.
1 Maaddooyinka Mojito
2 Sida loo sameeyo mojito talaabo talaabo ah
3 Xusuusin, kala duwanaansho, iyo tabaha
3.2 Peppermint ama reexaanta?
3.3 Ma jeceshahay inay ka macaan tahay?
3.4 Burburay ama baraf qabow ah?
3.5 Nuurad dhan ama nuurad ah?
45 ml rum cad
90 ml oo biyo dhalaalaya
Sida loo sameeyo mojito talaabo talaabo ah
Muraayad afka badan leh oo leh awood wanaagsan, ku dar laba qaado oo sonkor ah (waad ku dari kartaa waqti dambe haddii aad u aragto inay qadhaadh tahay marka aad dhadhaminayso), 7-8 caleemo reexaanta iyo nus nus ah, goo goobaal (iska tuur caarada ).
Si tartiib ah ugu burburi maaddooyinka hoobiye ama maacuun fidsan. Wax ka badan toban istaroog. Maaha in la tirtiro, laakiin waa in la sii daayo oo la isku daro udgoonka iyo dhadhanka kala duwan.
Kudar ruugga cad, biyo dhalaalaya kuna dabool baraf.
Si tartiib ah ugu qas dhammaan walxaha ku jira qaaddo. Adeegso dhaqdhaqaaqyada wax lagu duubo.
Ku dar baraf badan. Ka fikir inay wax yar ka soo baxdo cidhifka muraayadda si soojeedintu u noqoto mid soo jiidasho leh, in kastoo aysan muhiim ahayn. Sidoo kale, ku qurxin geedo yaryar oo ah miridh iyo cad cad oo lime ah (samee jeex jeex ah si uu ugu ekaado geeska galaaska)
Hadda dhig labo caws ... oo ku raaxee mojito-gaaga!
Xusuusin, kala duwanaansho, iyo tabaha
Miyaad jeceshahay mojito-kaaga inuu xoog yeesho? Xaaladdaas oo kale, xaji qadarka ruumka oo yaree qadarka biyaha dhalaalaya. Ama si fudud u kordhi mililooyinka milixda, adoo kudaraya buufin saaid ah mojito. Laakiin iska hubi inaad si fiican u walaaqday si ay si sax ah isugu milmaan.
Awoodda khamriga ee mojito way kala duwan tahay waxayna kuxirantahay nooca iyo qadarka rum ee la isticmaalay. Qaddarka biyaha dhalaalaya iyo casiirka liinta ayaa sidoo kale saameyn ku leh cabbitaanka ugu dambeeya ee khamriga isku-dhafkan. Haddii aad isticmaasho rucub leh boqolkiiba aalkolo 40%, qaddarka ku jira qoddobkan kor ku xusan waxay keeneysaa mojito leh darajo 14º ah, qiyaas ahaan.
Peppermint ama reexaanta?
Marka la eego dhirta udugga, waxaad isticmaali kartaa reexaanta cusub hadii aadan haysan basbaas (ama haddii aad doorbideyso dhadhanka geedka koowaad kan labaad). Labaduba si qumman ayey ugu shaqeynayaan mojito.
Waxa muhiim u ah tillaabadan ayaa ah iska hubi in caleemaha waranka / reexaanta aysan jabin marka aad diyaarinayso mojito. Ujeeddadu waa in qaybaha yaryar aysan soo gaarin afkaaga markaad wax cabeyso. Sidoo kale, tixgeli inaad dhigato qurxinta (spearmint / reexaanta iyo lime) iyo dhumucda isla muraayadda dhinaceeda. In kasta oo aysan muhiim ahayn, haddana waxaa loo tixgeliyaa inay ka caawinayso waayo-aragnimadu inay dhammaystirnaato, maaddaama kabasho kasta ay la socoto udgoonkeeda.
Ma jeceshahay inay ka macaan tahay?
Waxay noqon doontaa buun buunin haddii la yiraahdo waxaa jira waxyaabo badan oo mojito ah sida ay jiraan dad diyaariya, laakiin waa waxtar in la helo fikrad ku saabsan kala duwanaanshaha yar yar ee lagu fulin karo diyaarintiisa. Midkood wuxuu xiriir la leeyahay xaddiga sonkorta. Dadka qaar waxay rabaan natiijo ka macaan. Xaaladdan oo kale, wax dhibaato ah kuma jirto in lagu daro sonkor badan. Ikhtiyaar kale ayaa ah in lagu beddelo biyo dhalaalaya cabitaannada fudud sida soodhaha ama sprite..
Burburay ama baraf qabow ah?
Mojito asalka ah wuxuu leeyahay baraf baraf halkii baraf la jajabiyey. Labada ikhtiyaarba si fiican ayey u shaqeeyaanIn kasta oo xabadaha ay si tartiib tartiib ah u dhalaalaan, qodob loo tixgeliyo meelaha diiran. Haddii aad doorbideyso baraf la jajabiyey, waad iibsan kartaa mar hore oo la shiiday ama adigu iskaa u sameysan. Ku duub xoogaa baraf ah shukumaan shaah ah oo ku dhaji meel adag. By habka, waxay kaa caawin doontaa inaad xoogaa yareynta walaaca.
Nuurad dhan ama nuurad ah?
Lime nus ah ayaa lagu dari karaa gebi ahaanba ama la tuujin karaa. Waa in la ogaadaa in xulashada koowaad waxay bixisaa dhadhan iyo caraf badan maqaarka awgeed. Isla sidaas oo kale ayaa dhacda markii peppermint ama reexaanta lagu taabto calaacasha gacanta ka hor inta aan lagu darin muraayadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Sida loo sameeyo mojito